သင့် Android မှ ဒေတာများကို သူများတွေ ပြန်ရှာမရအောင် ဘယ်လို ဖျက်မလဲ? – DigitalTimes.com.mm
သင့် Android မှ ဒေတာများကို သူများတွေ ပြန်ရှာမရအောင် ဘယ်လို ဖျက်မလဲ?
Ko Thuya May 26, 2018
သင့် Android ကို ပြန်ရောင်းချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားလူကို ပေးချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ဒေတာများကို ရှင်းလင်းပြီး Factory Reset ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Factory Reset ချလိုက်ရုံနဲ့ သင့် ဒေတာများကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မပျက်ဆီးစေပါဘူး။ အဲဒီအတွက် သင့်ဒေတာများကို Recover မလုပ်နိုင်အောင် Android Device ကို Wipe ပြုလုပ်နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Storage ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်ပါ။
စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ပီစီများမှ ဒေတာများကို ပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့ Apps or Software များစွာ ရှိနေပါတယ်။ Android အပါအ၀င် OS အများစုမှာ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်တာနဲ့ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီဖိုင်ကို ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ထားပြီး သူ့နေရာကို Free Space အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ ဖိုင်အသစ်များ အဲဒီနေရာ ရောက်လာမှသာ ဖျက်ထားတဲ့ ဖိုင်ဟာ တကယ် ပျက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Android Device ကို မှန်ကန်စွာ Wipe ပြုလုပ်နည်း
Android Device မှ ဒေတာများကို လုံးဝ ပျောက်ပျက်သွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ တိုက်ရိုက် နည်းလမ်းတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ ဒေတာများကို Recover ပြုလုပ်လို့ မရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတော့ ရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို Factory Reset ပြုလုပ်ပြီးရင်တောင် သင့်ရဲ့ ဒေတာများဟာ အမှန်တကယ် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း မရှိပါဘူး။ အဲဒီအတွက် သင့်ရဲ့ ဒေတာများကို အခြားလူများ Recover မလုပ်နိုင်အောင် အရင်ဆုံး Encrypt လုပ်ရမှာပါ။ Settings> Security ထဲသွားပြီး Encrypt ကို နှိပ်ပေးပါ။ ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအပေါ် မူတည်ပြီး Encrypt ပြုလုပ်ရတဲ့ နေရာဟာ အနည်းငယ် ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Factory Reset ပြုလုပ်ပေးပါ။
အရေးမကြီးတဲ့ ဖိုင်များကို ဖုန်းထဲ ထည့်ပေးပါ။
Factory Reset ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာမှ သင့်ရဲ့ ဒေတာများကို ဖျက်ဆီးချင်ရင်တော့ အရေးမကြီးတဲ့ ဖိုင်များကို ဖုန်းထဲထည့်ပေးပါ။ အဲဒီဖိုင်များဟာ သင့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်များ နေရာကို အစားထိုး ၀င်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သငျ့ Android မှ ဒတောမြားကို သူမြားတှေ ပွနျရှာမရအောငျ ဘယျလို ဖကျြမလဲ?
သငျ့ Android ကို ပွနျရောငျးခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ အခွားလူကို ပေးခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ သငျ့ရဲ့ ကိုယျရေး ကိုယျတာ ဒတောမြားကို ရှငျးလငျးပွီး Factory Reset ပွုလုပျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Factory Reset ခလြိုကျရုံနဲ့ သငျ့ ဒတောမြားကို ရာခိုငျနှုနျးပွညျ့ မပကျြဆီးစပေါဘူး။ အဲဒီအတှကျ သငျ့ဒတောမြားကို Recover မလုပျနိုငျအောငျ Android Device ကို Wipe ပွုလုပျနညျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Storage ရဲ့ အလုပျလုပျပုံကို နားလညျပါ။
စမတျဖုနျး၊ တကျဘလကျ၊ ပီစီမြားမှ ဒတောမြားကို ပွနျရှာပေးနိုငျတဲ့ Apps or Software မြားစှာ ရှိနပေါတယျ။ Android အပါအဝငျ OS အမြားစုမှာ ဖိုငျတဈခုကို ဖကျြလိုကျတာနဲ့ ပြောကျကှယျသှားခွငျး မရှိပါဘူး။ အဲဒီဖိုငျကို ကိုယျယောငျဖြောကျထားပွီး သူ့နရောကို Free Space အဖွဈ သတျမှတျလိုကျတာပါ။ ဖိုငျအသဈမြား အဲဒီနရော ရောကျလာမှသာ ဖကျြထားတဲ့ ဖိုငျဟာ တကယျ ပကျြသှားတာ ဖွဈပါတယျ။
Android Device ကို မှနျကနျစှာ Wipe ပွုလုပျနညျး
Android Device မှ ဒတောမြားကို လုံးဝ ပြောကျပကျြသှားအောငျ ပွုလုပျနိုငျတဲ့ တိုကျရိုကျ နညျးလမျးတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ ဒတောမြားကို Recover ပွုလုပျလို့ မရနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတော့ ရှိပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ ဖုနျးကို Factory Reset ပွုလုပျပွီးရငျတောငျ သငျ့ရဲ့ ဒတောမြားဟာ အမှနျတကယျ ပြောကျကှယျသှားခွငျး မရှိပါဘူး။ အဲဒီအတှကျ သငျ့ရဲ့ ဒတောမြားကို အခွားလူမြား Recover မလုပျနိုငျအောငျ အရငျဆုံး Encrypt လုပျရမှာပါ။ Settings> Security ထဲသှားပွီး Encrypt ကို နှိပျပေးပါ။ ဖုနျးထုတျလုပျသူအပျေါ မူတညျပွီး Encrypt ပွုလုပျရတဲ့ နရောဟာ အနညျးငယျ ကှာခွားနိုငျပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ Factory Reset ပွုလုပျပေးပါ။
အရေးမကွီးတဲ့ ဖိုငျမြားကို ဖုနျးထဲ ထညျ့ပေးပါ။
Factory Reset ပွုလုပျပွီးတဲ့ နောကျမှာမှ သငျ့ရဲ့ ဒတောမြားကို ဖကျြဆီးခငျြရငျတော့ အရေးမကွီးတဲ့ ဖိုငျမြားကို ဖုနျးထဲထညျ့ပေးပါ။ အဲဒီဖိုငျမြားဟာ သငျ့ရဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ဖိုငျမြား နရောကို အစားထိုး ဝငျရောကျခွငျးဖွငျ့ ဖကျြဆီးပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Quick Charge 4.0+ ပါထောက်ပံ့ပေးထားမယ့် Xiaomi Mi 8